रुसी सेनामाथि लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप, प्रमाणित भए के गर्लान पुटिन ? — Sanchar Kendra
रुसी सेनामाथि लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप, प्रमाणित भए के गर्लान पुटिन ?
काठमाडौँ । युरोप काउन्सिलको संसदीय सभामा युक्रेनको प्रतिनिधिमण्डलकी प्रमुख मारिया मेजेन्तसेवाले रुसी सेनाले महिलामाथि बला’त्कार र यौ’न दुर्व्यवहार गरेको दाबी गरेकी छिन् । ​
स्काइ न्यूजसँगको एक अन्तर्वातामा उनले भनिन्, ‘त्यहाँ एउटा मुद्दा छ, जुन हालै धेरै चर्चा गरिएको थियो किनभने यो अभियोजनकर्ताको कार्यालयमा रेकर्ड गरिएको र अगाडि बढिरहेको छ । हामी विवरणहरूमा जाँदै छैनौँ । तर, यो एकदम डरलाग्दो दृश्य हो । राजधानी किभनजिकै एउटा सहरमा एक नागरिकलाई उसको घरमा गो’ली हानेर मारिएको थियो । ’
उनले अगाडि भनिन्, ‘मलाई यो भन्न दुःख लागिरहेको छ कि उनलाई साना बच्चाहरुकै अगाडि बला’त्कार गरिएको थियो । मादक पर्दाथले उत्तेजित सिपाहीले परिवारको घरमा पसेपछि श्रीमानको ह’त्या गरेको र आफ्नी पत्नीलाई बारम्बार बला’त्कार गरेको युक्रेनका अभियोजनकर्ता जनरल इरिना भेनेदिक्टोभाले बताएका छन् ।
अभियोजनकर्ताले सार्वजनिक गरेको यो एउटा मुद्दाभन्दा पनि धेरै पीडितहरू छन । उता रुसले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको तर्फबाट रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबारे गरेको बयानलाई चेतावनीयुक्त रहेको बताएको छ ।
क्रेमलिनलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार ‘पुटिन सत्तामा बस्न सक्दैनन्’ भन्ने खालको सार्वजनिक बयान चेतावनी जस्तै छ । वास्तवमा, पोल्याण्डको वारसामा आफ्नो सम्बोधनका बेला शनिबार जो बाइडेनले भनेका थिए, ‘भगवानका लागि, यी व्यक्ति सत्तामा बस्न सक्दैनन् ।’
उनले युक्रेनमाथि रुसको हमलालाई लोकतन्त्र र निरंकुशता बीचको एउटा ठूलो संघर्ष बताएका छन् । पछि ह्वाइट हाउसको तर्फबाट बाइडेनको बयानमाथि स्पष्टिकरण दिने कोसिस गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति रुसमा सत्ता परिवर्तनको कुरा नगरिरहेको बताइयो ।
बाइडेनको बयानबारे क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोवलाई साध्दा उनले भने, ‘यो बयान निश्चित रुपमा खतरनाक छ । हामी निकै ध्यानपूर्वक अमेरिकी राष्ट्रपतिको बयानमाथि निगरानी राखिरहेका छौँ ।’ यो मामिलामा हालसम्म पुटिनको तर्फबाट कुनै सार्वजनिक बयान आएको छैन ।
यता रुबलमा रूसी ग्यासको भुक्तानी अस्वीकार्य हुने विश्वका ठूला सात औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह (जी–सेभन) समूहका सदस्य राष्ट्रले सोमबार दोहो¥याएका छन् । समूहमा बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र अमेरिका रहेका छन् ।
युक्रेनमा आफ्नो आक्रमणमाथि पश्चिमले लगाएको कमजोर प्रतिबन्धको बाबजुत मस्कोले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई प्रभावित हुन नदिन सङ्घर्ष गरिरहेको बेला यो कदम चालिएको हो । “मेरो विचारमा हामीले यस मागलाई पर्खालविरुद्ध पुटिनको पिठ्यूँ भएको रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ,” हबेकले आफ्ना जी–सेभेन समकक्षहरूसँगको छलफलपछि संवाददाताहरूसँग भने ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमान्युल म्याक्रोँले शुक्रबार पुटिनको ‘ग्यास–फर–रूबल’ मागलाई अस्वीकार गरिसकेका थिए । रूसी कदम ‘सम्झौताअनुरूप छैन र हामीले यसलाई किन लागू गर्ने भनेर म बुझ्न सकेको छैन,” म्याक्रोँले भने ।